China Yazvino chizvarwa inotakurika muti chiteshi smart nhare mbozha charger PD100W Kugadzira uye Fekitori | Staba Electric
Yekupedzisira chizvarwa inotakurika muti chengarava nhare mbozha charger PD100W
1.Diki diki diki compact chimiro muhomwe-inoshamwaridzika saizi.
2. Ultra inokurumidza kuchaja kugona kuchengetedza kusvika kungangoita 50% nguva.
3. Multi high power USB (A / C) zviteshi zvemafoni nhare.
5. Kubudirira kwepamusoro kusvika 94%.
6. Njere simba rekuparadzira nharembozha.
*Multi Usb C Inokurumidza Chaja 100W Tsananguro Yemashoko
USB-C mudhuri wechaji yakanakira vashandisi vanoda compact compact iyo isina kureruka uye ine simba. Kuburitsa kusvika pa100 W, PD mudhijajaja zvese zvaunofarira zvishandiso zvinosanganisira foni yako, Nintendo Chinja, uye MacBook (nguva dzekuchaja dzinoenderana nemafekitori echigadzirwa).
Inoratidzira shanduko dzichangoburwa mu-kumhanyisa-kumhanyisa tekinoroji, USB-C simba kuburitsa uye adaptive nekukurumidza kuchaja, iyi yega charger ndiyo yese yaunoda kuti usimbise zvigadzirwa zvako zvazvino uye ugare kumberi kwekakona kune chero remangwana remagetsi. Ose ari maviri emachiteshi anogona kuendesa kusvika ku18 watts yeakakwira-magetsi kubhadharisa kune zvese kubva kumafoni efoni uye mahwendefa kune ane simba-ane nzara USB-C malaptop senge 12-inch Macbook. Inotsigira nekukurumidza kuchaja kwe iPhone kubhadharisa iPhone 8 kana gare gare kubva zero kusvika 50% mumaminitsi makumi matatu netambo inosanganisirwa, uye mamwe mafoni / mapiritsi pakumhanya kwakanyanya.
Inotungamirwa naGaN tech, inojaja iri 30% diki pane mamwe majaja, akaomesesa kuperekedza iwe kwese kwaunoenda. Iyi compact 100W PD charger ine USB-simba kuendesa zvinoreva kukurumidza kuchaja kune ako USB-PD-inogoneswa michina. Iyi yekushanya-inoshamwaridza maviri USB madzirojaja inogadzirwa kununura ka5 simba remajaja akajairwa kune akawanda madhijitari panguva imwe chete. Inoratidzira shanduko dzichangoburwa mu-kumhanyisa-kumhanyisa tekinoroji, USB-C simba kuburitsa uye adaptive nekukurumidza kuchaja, iyi yega charger ndiyo yese yaunoda kuti usimbise zvigadzirwa zvako zvazvino uye ugare kumberi kwekakona kune chero remangwana remagetsi.
PD mudhuri wechaji ine kukwirisa kwepamusoro & kushanduka, maviri-mu-imwe mhinduro yekuchaja iyo inokwanisa kutsigira ese USBC uye USBA zvigadzirwa zvine simba senge mafoni uye aptops yekushanda kungave yakazvimiririra kana panguva imwe chete. Iyo USB yemudhuri charger ine inogadziriswa plug dhizaini inokutendera iwe kudzivirira kudzivirira zvimwe zvitoro uye repositions iyo USB A / C chiteshi kuti ive nyore kuisa tambo yakabatana - kunyanya inobatsira kana uchishandisa mune tambo yemagetsi kana yekudzivirira dziviriro ine akawanda-maresitoreti. USB PD mudhijaja ine Akangwara magetsi kugovera, ichiwedzera kushanda kwekushanda kweimwe chete kana akawanda madivayiri
*Multi Usb Inokurumidza Chaja 100W Parameter
Divi: 63 * 63 * 30.5mm
Simba Guru 100w Gan Pd Chaja
Inopa yakakura 100W yesimba rekuchaja - inokwana kubhadharisa maviri USB-C malaptop uye 2 mafoni panguva imwe chete. USB-C Kubuda: 5V = 3A / 9V = 3A / 20V = 5A. USB-A Kubuda 5V = 2.4A max pachiteshi.
Akangwara Simba Kugovera Macbook Pro Charger
Inopa kusvika ku100W yesimba rekuchaja nepo imwe kifaa ichibatana nechiteshi che USB-C, kana kugovera zvinoburitswa kusvika pamadhigiri mana akabatana. Izvi zvinogonesa kuzara-kumhanya kuchaja kune akawanda madhijitari panguva imwe chete.
Yenyika Yose Kugarisana QC 3.0 Wall Chaja
Yakagadzirirwa isina chairo mashandiro ane USB-A uye USB-C mafoni, mapiritsi, malaptop, nezvimwe, kusanganisira iyo 15-inch MacBook Pro, 2018 MacBook Air, uye 13-inch Dell XPS, nezvimwe.
Kurumidza Kubhadharisa Multi Usb Kurumidza Charger
Izvo zvinogona kushanda pakakwirira voltage uye nekuchinja frequency iyo inoguma mune madiki uye anoshanda zvakanyanya mataja
Zvadaro: Yakakurumbira yekufambisa yakakwira simba 65W mhando c pd usb charger PD65W